China Wooden super bass USB bluetooth 2.0CH stereo audio sound Hi-Fi hifi bookhelf speaker (BT-106) Kugadzira uye Fekitori | Eyin
• 1XAUX INPUT - Yakabatana nyore kune chero chishandiso chine 3.5mm headphone kuburitsa kana maviri RCA kuburitsa.
• Bluetooth vhezheni- Nyore kubatanidza chishandiso kuburikidza neBluetooth kunakidzwa nemimhanzi yakanaka.
• USB Input-Ridza mimhanzi kuburikidza ne USB kifaa.
• STUDIO SOUND QUALITY - Natural kurira kubereka kubva ku13mm sirika dome tweeter uye 4 inch yakazara renji yuniti.
CLASSIC WOOD FINISH - Yakakwira mhando MDF huni kuvaka inopedzwa nehuni mhedzisiro vinyl inoshanda sekurumbidza kukuru kune chero kushongedzwa kwemba.
Iyo BT-106 inofambiswa nesheferi masherufu maspika akabatanidza kutarisa kwe retro nepfungwa yemazuva ano yeodhiyo mhando. Kana iwe uchitsvaga anokwanisika uye akasiyana-siyana masherufu maspika ane runyararo ruzha iwo BT-106 mabhuku eshalufesi mutauri ndiko kwako kuenda-kune 2.0 mutauri system. Inoratidzira 4-inch bass mutyairi uye yakaenzana, ine flared bass reflex port, iyi shefu yemasheferi mutauri system inopa akasimba, akapfuma mabass manotsi ayo akazara nekuvapo uye kudzika. Iyo yakatendeka kurira kugadzirwa uye kuita kweBT-106 ndeapi chero audiophiles kurota. Vazhinji Edifier vatengi vari kushandisa yedu BT-106 inofambiswa masherufu emabhuku masherufu ekubatanidza avo turntables yeakanakisa odhiyo ruzivo. Nakidzwa neyako yakasarudzika vinyl's uchinakidzwa nekufambira mberi kwezuva razvino tekinoroji tekinoroji.
Rongedza iwe ruzivo rwako rwekuteerera nemabass, anotenderera uye evhoriyamu dials pane anoshanda shefu yesherufu mutauri. Ruzha rwemhando yepamusoro rwakaburitsa fomu aya mashelff mutauri anounza chaiyo chaiyo inosimudzira midrange iyo inofadza chero muongorori. Iyo compact yakakura saizi inodzora kure inosanganisirwa. Iwe unogona kugadzirisa vhoriyamu uye kumisikidza masipika kuti mbeveve pazvinenge zvichidikanwa pasina kusvika kune maspika; simba uye kukwana pamunwe wako. Iyo Edifier R1280T inouya neyakavakirwa-mukati toni yekudzora parutivi rweanoshanda mutauri. Zvichienderana nezvinodiwa, iwe unogona kugadzira zvigadziriso zvidiki zvekufamba uye mabhasi kubva -6 kusvika +6 db. Dhijitari vhoriyamu kutonga kunongoerekana kwaiswa kune yakasununguka nhanho nguva dzese mutauri paanowedzerwa.
Dual RCA Inzwa Zvinotaurwa
BT-106 inofambiswa nesherufu masherufu maspika anokutendera kuti ubatanidze kune akawanda maodhiyo madhizaini uchishandisa iwo maviri RCA zvigadzirwa. Nekutarisa kumashure kwepaneru iwe unogona kutaura zviri nyore kuti chimwe cheizvi mutauri wekungoita uye mumwe mutauri anoshingairira. Mukurukuri anoshanda ane zvigadzirwa zviviri zviri kumashure. Izvi zvinoshandiswa zvakakwana kune RCA kuRCA kana RCA kuAUX kubatana. Vabatanidze ivo kuPc, laptop, piritsi, foni kana rekodhi mutambi. Masipika akabatana kune mumwe nemumwe kuburikidza neyakajairika mataipi waya. Mhando dzetambo dzakasanganisirwa dzinovimbisa mutengi wedu kunakidzwa nemimhanzi yavo kubva kumidziyo mizhinji kunze kwebhokisi.
Pashure: Wepamusoro mhando MAXX BASS inobata screen soundbar ine 2.4G isina waya subwoofer (SP-602 ine subwoofer)
Zvadaro: Yakakwira mhando PC 2.0 USB Mutambo weTV Mutambi, Soundbar Bluetooth Mutauri (SP-600B)
Makaralı Soundbar Wired Uye Wireless
Mini Wireless Makaralı Mutauri
Inotakurika Wireless Makaralı Mutauri
Factory Price Rakajeka RGB Vatauriri Makaralı W ...
2019 Yakasarudzika dhizaini Multi-mashandiro mini soundbar ...
Inotakurika USB mini Wired 2PCS desktop / laptop s ...
Factory Cheap Price 2.0 Small kukura Computer Spe ...
ODM gadzira hifi vakurukuri huni pusa Hom ...
Yakakwira Simba Wooden Mabheshelf Shelf Mutauri weImba Th ...
Wifi Soundbar YeTv, Karaoke Soundbar, Wifi Soundbar Vatauri, Tv And Soundbar Gomo, Alexa Soundbar, Sravana Sameeralu Serial 4th Tv Soundbars,